Nguwuphi umzobo wokhuselo lomtyali mali? | Ezezimali
Imibuzo, eyayivela kuma-90% abantu, yayijolise kwelona xabiso lincinci lodweliso nakwezokubizwa kwe-Abertis. IOfisi yoMkhuseli woTyalomali eMadrid Stock Exchange iphathe izicelo ezingama-13.250 zolwazi ngo-2018, 2,3% ngaphezulu kwezicelo eziphendulwe kunyaka ophelileyo. I-90% yemibuzo zenziwe ngabatyali mali babucala.
Kule nto inegalelo lokuba amasebe ezabelo kwiinkampani ezidwelisiweyo, i-CNMV, iBhanki yaseSpain kunye nemibutho yabathengi ihlala ithumela abatyali zimali kule ofisi, iyithatha njengeyona ndlela ikhawulezayo nengathathi cala yokusombulula iingxaki zabo. amathandabuzo malunga nemarike yemasheya. Inani lezikhalazo ezifunyenwe yiOfisi lehle ngo-2018 kwaye iqondo lempixano ngokubhekisele kwimbambano yemiba ephakanyisiweyo nayo yehlile.
Umahluko we elona xabiso lokurhweba libambekayo I-de la Bolsa, ephuma kwi-0,01 euro ukuya kwi-euro eyi-0,0001, ijolise kwinxalenye ebalulekileyo yezicelo zolwazi. Kunye nale milinganiselo, imfuneko yokufumana iibhetshi zokhuseleko yasekwa kwezo zikhuseleko ezinamaxabiso angaphantsi kwe-0,01 euros. Oko kukuthi, ukuba ezo xabiso azinakubekwa ngokwamaqela, azinakuthengiswa.
1 Isikhuseli se-Inverter: imisebenzi
2 Injongo yale nkonzo
3 Ukufuna ulwazi
4 Uninzi lweemveliso ezifunwayo
5 Ulwazi lwento
6 Ulwazi lwesitokhwe
7 Uhlobo lothintelo lwezenzo
Isikhuseli se-Inverter: imisebenzi
Imibuzo emininzi nayo ifunyenwe kumsitho we I-Abertis yokurhoxisa ibhidi yokuthatha. UCarlos Fernández, uMkhuseli woTyalo-mali waseMadrid Stock Exchange, ucinga ukuba kwezi meko amajelo olwazi kunye nabathengisi kufuneka omelezwe. "Amaziko agcina imali kufuneka asebenzise iindlela ezifanelekileyo zokuqinisekisa ukuba umntu ngamnye kubatyali bazazi iimeko kunye nefuthe lomsebenzi".
Ukusukela ekudalweni kwenani loMkhuseli woTyalomali, injongo ebisenziwa yile ofisi ibikukuthintela kunye nokuthintela amabango kwaye, ukuba oku akunakwenzeka, ukuqikelela izikhundla kunye ukufikelela kwisivumelwano phakathi kwamaqela achaphazelekayo. Umjelo wonxibelelwano ovulekileyo phakathi kwabatyali zimali kunye noMkhuseli woTyalomali unemiba emibini: kwelinye icala, ethathwe kulwazi nakuqeqesho lomsebenzi, ngesisombululo semibuzo ngefowuni, imibuzo kunye neempendulo malunga nezabelo ezithengiswa kwiStock Exchange, ulwazi malunga ukukhupha kunye nokusebenza kweemarike kwaye, kwelinye icala, isisombululo samabango.
Injongo yale nkonzo
Injongo yeNkonzo yoLwazi Jikelele kukunxibelelana ngeenkcukacha kunye nedatha esisiseko ngokubhekisele kwimarike yemasheya yaseSpain kunye nolwazi malunga nokusebenza kwemakethi ekubhekiswa kuyo, konke oku ukuze ube negalelo ukuququzelela ukwenziwa kwezigqibo ngabatyalomali. Ke, ngeNkonzo yoLwazi Jikelele, ulwazi olukhoyo kwiMadrid Stock Exchange kuwo nawuphi na umxholo onxulumene nemarike ngokwayo lwenziwa lufumaneke kubatyali mali abanomdla.
Ukuphuhliswa komsebenzi wokufundisa woMkhuseli woTyalomali ngexesha le2018, edluliselwe kwiNkonzo yeNgcaciso Jikelele, idityanisiwe kwidatha ebonisa, kwelinye icala, Iiprofayili zabantu abafuna ulwazi kwaye, kwelinye, imicimbi ekuqwalaselwe ezo zicelo zolwazi.
Umtyalomali wabucala uyaqhubeka ukuba ngoyena mntu ucela ulwazi, emele i-90% yazo zonke izicelo zolwazi, i-4% ngaphezulu kunonyaka odlulileyo. Ngomnye unyaka kuyaqinisekiswa ukuba amaziko emali, xa ejongene namathandabuzo okanye imibuzo ngokubanzi malunga ne ukusebenza kwemarike yemasheya Bahlala bethumela umtyali mali kule Ofisi, beyithatha njengendlela ekhawulezayo nengathathi cala yokwazisa nokucoca amathandabuzo malunga nokwenziwa kwemicimbi yesitokhwe.
Ngale ndlela, uMkhuseli woTyalo-mali uyaqhubeka abe lelona jelo lifanelekileyo lokunika impendulo ecacileyo kunye nexesha elifanelekileyo kwimibuzo ebekwa ngabatyali mali ngayo. Kulo nyaka phambi koMkhuseli woTyalomali kufunyenwe inani elingaqhelekanga lamabango afunyenweyo njengemibuzo yolwazi, kuba yayi malunga nokungazi kwabatyali mali ngaphambi kokuba imigaqo esebenzayo kumatyala ekhonkrithi.
Ikwafaka igalelo kukuba abanini zabelo yeenkampani ezidwelisiweyo kwaye, kwezinye iimeko, iKhomishini kaZwelonke yeMarike yoKhuseleko, iBhanki yaseSpain kunye nemibutho yabathengi kunye nabasebenzisi bathumela umtyali mali kule Ofisi, eyithatha njengejelo elaneleyo lokusombulula amathandabuzo ahambelana nemarike.
Uninzi lweemveliso ezifunwayo
Imibuzo yolwazi ngamalungu yentengiso yehlile xa kuthelekiswa nonyaka ophelileyo, ngelixa leyo yemibutho yezemali ihleli ifana kakhulu. Kufuneka kuqatshelwe ukuba uninzi lwezicelo zolwazi oluvela kumaziko emali zigxile, ngendlela ekhethekileyo, ngexesha lokubhengezwa Irhafu yengeniso yomntu, kwaye unyaka wonke thethwano lujolise kulawulo lwesivumelwano sabantu abababeka.
Kwelinye icala, amaziko ezezimali ayaqhubeka nokugxila kwiminqweno yawo kulwazi olunxulumene notshintsho lwembali kukhuseleko lwabo, ukulunikezela, njengenye yeenkonzo, kubaxhasi babo. Ngokumalunga nabanikezeli bezokhuseleko ezibhalwe kuStock Exchange, kulandelwa imeko efanayo nonyaka ophelileyo, kuba baqokelela ulwazi oluthe ngqo, kwaye izicelo zabo zigxila ekunikezelweni kwezatifikethi zoluhlu kumsitho imisebenzi yequmrhu (ukhetho lwesahlulo, ukonyuka ngokungafumani mali, kunye nokutshintsha kweebhondi eziguqulweyo kwizabelo).
Okokugqibela, kulo nyaka izicelo ezenziwe ziinkonzo zophononongo kunye nesebe lohlalutyo azisebenzi kangako kwaye izicelo ezenziwe ngabafundi ekukhangeleni idatha ulwandiso lwemisebenzi. Ngokubhekisele kwiindlela ezisetyenziselwa ukwenza imibuzo nokufumana ulwazi, kufanele kuqatshelwe ukuba ngo-2018 umnxeba wawuseyeyona ndlela isetyenziswa kakhulu, ilandelwa yi-imeyile, ngeposi eqhelekileyo iphantse yanyamalala ngokupheleleyo, kwaye ikonwabele ukwanda kancinci kwinani labantu yiza buqu kwi-Ofisi yoMkhuseli woTyalomali
Kulo nyaka u-2018, kuyaphawuleka ukuba ulwazi oluceliweyo, olubandakanywe phantsi kwesihloko esithi "abanye" kule theyibhile ingezantsi, ligxile kwimibuzo enxulumene imisebenzi yemarike yemasheya yemihla ngemihla, ukukhankanywa okukodwa kufanelekile kwimibuzo ephakanyisiweyo malunga notshintsho olwenziwe kwiMigaqo yokuSebenza yeNkqubo yokuDityaniswa kweNtengiso yeStock ukuze ikwazi ukuziqhelanisa nezibonelelo eziqulathwe kuMyalelo ka-2014/65 / EU, wePalamente yaseYurophu nakwiBhunga, we-15 Meyi Ngo-2014, ngokunxulumene neemarike zezixhobo zemali.
Ngaphakathi kolwazi oluceliweyo kuMkhuseli woTyalomali, kufuneka kuqaqanjiswe oku kulandelayo: Imicimbi ephantsi kokucela ulwazi ibandakanya uluhlu olubanzi, ukusuka kumaxabiso ezokhuseleko abhalwe ngexesha lokwenyani (nangona ezi zicelo zincipha ngokuthe chu ngenxa yobukho ezahlukahlukeneyo zixhobo ze khompyutha ezibonelela ngale datha), kwezona zicelo zinzima kwiinkcukacha zokusebenza kweSpanish stock market (phakathi kwayo kukho imibuzo kwiimpawu zeentlobo ezahlukeneyo zeodolo, kunye nendlela yokwabela iiyunithi zorhwebo kwiifandesi).
Kukule ndibano apho uMkhuseli woTyalomali enza umsebenzi wakhe wokufundisa, ukusukela kwindlela khangela iwebhusayithi Ukufumana ulwazi kwiStock Market, ngendlela abanini zabelo beenkampani ezidwelisiweyo abanokuthi bajongane nolwazi kwiwebhusayithi yeKomishoni yeSizwe yoThengiso lwezoKhuseleko, ngendlela yokwenza iklabhu yotyalo mali.
Ngenxa yomxholo wezicelo ezithile zolwazi, iyavunywa into yokuba abatyali mali bafumana okungakumbi ulwazi kwimarike yaseSpain, nangona behlala kunye nabatyali mali abangenamava kubo ekuyimfuneko ukuba bacacise ezona ngcinga zisisiseko zotyalo mali kwiStock Market, ezinje ngohlengahlengiso lwamaxabiso olwenziwe yimarike ngenxa yeziganeko ezinje ngokuhlawulwa kwesahlulelo.
Uhlobo lothintelo lwezenzo
Indima yoMkhuseli woTyalomali ikwagubungela inkalo yothintelo, kuba, njengoko kuchaziwe ngaphambili, iyasebenzisana ekwandiseni inkcubeko yezemali yomtyali mali ngamnye, ukuze ngolwazi oluthe kratya malunga nokusebenza kweemarike zaseSpain, iziphumo ezinokubakho ezingafunekiyo ngenxa yokungazi ukusebenza kwazo zinokuthintelwa.
Uninzi lwemibuzo luhambelana nabatyali mali babucala ukuqinisekisa ukuba imisebenzi eyenziwa ngabalamli ihlengahlengisiwe kwiodolo ezithunyelwe ngumtyalomali nakwimiGaqo yokuThengisa yemarike yaseSpain. Kukwaphawuleka kwakhona isicelo solwazi kumaxabiso embali ezokhuseleko ezamkelweyo kurhwebo kwiMadrid Stock Exchange. Olu lwazi alufunwa kuphela kubatyali mali babucala, kodwa nangamaziko emali, ukulungiselela ukubonelela olu lwazi kubaxhasi babo, njengenye inkonzo engaphezulu.
Njengokuba bekuqhele ukwenziwa unyaka nonyaka, ngexesha lokufakwa kweRhafu yeNgeniso yobuqu, iminxeba, evela kubantu ngabanye nakwiingcali, ukuqokelela ulwazi malunga nemisebenzi yequmrhu eyenziwa ziinkampani ezidwelisiweyo kunye nemihla yokufunyanwa kwezabelo kunye namaxabiso okufumana. .
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Iimveliso zezemali » Nguwuphi umzobo wokhuselo lomtyali mali?
Ukuxakeka kwecandelo lamandla kwimarike yaseSpain